Yurub Archive - Gool FM - page 3	twitter
Neymar Jr oo xalay buuxsaday 500 oo kulan … (Imise gool ayuu dhaliyey mudadaas?)
(Barcelona) 20 Maarso 2017 – Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xalay kulan ka tirsan horyaalka La Liga oo ay soo dhowaysay Valencia, waxa ay kaga adkaatay 4-2.
Haddaba inkastoo uu gool dhalin Neymar waxa uu kulankii xalay sameeyey labo gool caawin, waxaana uu dhiibay labadii gool ee ay kala dhaliyeen Luis Suarez iyo Andre Gomes.
Neymar ayaa xalay ciyaaray kulankiisii 500-aad ee xirfaddiisa ciyaareed xul iyo kooxba, waxa uu mudadaas dhaliyey isku dar 304 gool.
Xulkiisa qaranka Brazil waxa uu u saftay 99 
Lionel Messi oo xalay RIKOODH cusub u dhigay xiddigaha horyaalka La Liga
Haddaba Lionel Messi ayaa dhaliyey labo ka mid ah afarta gool oo ay Barcelona ku badisay kulankan, mid ka mid ah labadaas gool ayaana ahaa Rigoore, isagoo RIKOODH cusub u dhigay Messi horyaalka La Liga.
>- Waxa ay ahayd markii 100-aad oo uu Messi kulan kasta 2 gool u dhaliyo tartammada oo dhan kooxdiisa Barcelona.
Maxay ka dhignaayeen goolashii ay Luis Suarez iyo Andre Gomes xalay u dhaliyeen kooxda Barcelona?
Haddaba Luis Suarez iyo Andre Gomes ayaa dhaliyey labo ka mid ah afarta gool oo ay Barcelona ku badisay kulankan.
Luis Suarez ayaa dhaliyey goolka barbaraha kooxdiisa qeybtii hore ee ciyaarta, waxaana goolkaasi uu ahaa goolkiisii siddeedaad oo uu Suárez ka dhaliyo kooxda Valencia tartammada oo dhan 7 kulan oo uu ka hortagay.
Dhinaca kale da’yarka 